Izindaba - ICoca-Cola ingena esikhundleni sezinkomishi ezenziwe kabusha, i-Unilever iphinda kabili amapulasitiki asetshenziswe kabusha
Imikhiqizo yabathengi yomhlaba wonke efana nePepsi, Coca-Cola, ne-Unilever benze izibophezelo ezinkulu zokupakisha. Ake sibheke, yini intuthuko yamuva yokupakisha esimeme yale mikhiqizo?
I-Pepsi-Cola Europe: Faka wonke amabhodlela epulasitiki asetshenziswe kabusha ngo-2022
IPepsi-Cola Europe, ekhiqiza iPepsi-Cola MAX, i-7Up Free, iTropicana nezinye iziphuzo, isanda kumemezela ukuthi izothatha indawo yayo yonke imikhiqizo yayo ngo-100% opakishwe kabusha opulasitiki ngasekupheleni kuka-2022.
IPepsi-Cola Europe izothatha indawo yayo yonke imikhiqizo yayo ngamapakethe ayi-100% asetshenzisiwe asetshenzisiwe ekupheleni kuka-2022.
Lesi sinyathelo siphendula ukuzibophezela kwenkampani emnothweni oyindilinga oyipulasitiki, kanti uPepsi Cola uthembise ukwehlisa isiphuzo saso sekhabhoni ngo-40%.
Ngaphambi kwalokhu, uPepsi-Cola ushintshe isiphuzo seNaked Smoothie kanye neTropicana Lean ngamaphakethe ayi-100 asetshenziswe kabusha.
IPepsi-Cola Europe nayo imake imininingwane engaphinda isetshenziswe ebhodleleni, ikhumbuza abathengi ukuthi baphinde basebenzise amabhodlela epulasitiki ngemuva kokuwasebenzisa. Ngasikhathi sinye, imininingwane ehlanganisiwe evuselelekayo iphinde yande emphakathini ngokusebenzisa iziteshi zabezindaba ezifana ne-TV kanye nemicimbi yemicimbi.
I-Coca-Cola Australia: Nciphisa ukusetshenziswa kwamathani ayi-40,000 epulasitiki omusha
Inkampani yase-Australia iCoca-Cola imemezele ukuthi ngasekupheleni kuka-2021, izonciphisa ukusetshenziswa kwamathani ayi-40,000 epulasitiki eyi-virgin (uma kuqhathaniswa nango-2017). Le nhloso izofezeka ngokufaka izinkomishi neziphuzo zayo zesiphuzo ezibandisiwe kufakwe upulasitiki osetshenzisiwe.
URussel Mahoney, uMqondisi Wezindaba Zomphakathi, Ezokuxhumana kanye Nokusimama kweCoca-Cola South Pacific, uthe ngonyaka odlule kunezinguquko ezithile esezenziwe emaphaketheni ase-Australia, kubandakanya ukufaka wonke amabhodlela epulasitiki ngomthamo ongaphansi kwelitha elilodwa ngamabhodlela epulasitiki asetshenzisiwe kabusha, futhi kususwa izindiza zepulasitiki ne-Agitator.
“Sinesibopho sokwehlisa umkhondo wezemvelo ngokusebenzisa izindlela ezintsha futhi sisize ukuxazulula inkinga yokungcola kukadoti wepulasitiki. Ukusetshenziswa kwezinkomishi neziphuzo ezibandisiwe kunguhlelo olulandelayo lomgomo weCoca-Cola womhlaba wonke wokunciphisa udoti wepulasitiki. ” Kusho uMahoney.
Ngokwombono kaCoca-Cola othi “Umhlaba Ongenamfucuza”, inhloso yawo emhlabeni wonke ukwenza kabusha nokusebenzisa wonke amabhodlela namakani kanye nokupakisha okuthengiswe ngonyaka ka-2030, nokuqinisekisa ukuthi zonke iziqukathi zalo zokupakisha ngeke zingene ezindaweni zokulahla udoti noma olwandle. Mayelana nalokhu, umthengisi webhodlela uCoca-Cola Amatil udlala indima enkulu ekuxhumaniseni uhlelo lokugcina izitsha zokupakisha (CDS) kulo lonke elase-Australia.
I-Coca-Cola ibuye yazibekela umgomo womhlaba wonke wokusebenzisa okungenani izinto ezingama-50% ezibuye zenziwe kabusha ekupakisheni ngonyaka ka-2030. Njengamanje, amabhodlela epulasitiki ase-Australia asefinyelele kulo mgomo.
I-Unilever: Ukusetshenziswa kwamapulasitiki asetshenziswe kabusha kuzophinda kabili ngonyaka ozayo
I-Unilever isanda kukhipha inqubekela phambili yakamuva yokupakisha kwayo okusimeme. Le nkampani ithe inyuse ukusetshenziswa kwayo kwamaplastiki asetshenziswe kabusha kwaba ngamathani angama-75,000, ngaphezu kuka-10% wokusebenzisa kwayo ipulasitiki. Inhloso yakwa-Unilever ukusebenzisa okungenani ama-25% epulasitiki osetshenziswe kabusha ngo-2025.
Ngonyaka owedlule, i-Unilever yathi lo mkhiqizo uzokwehlisa ukusetshenziswa kwamathani angaphezu kuka-100 000 epulasitiki eseyizintombi futhi usebenzise ngenkuthalo ipulasitiki esetshenzisiwe kabusha ngonyaka ka-2025, ukufeza inhloso yokuhlukanisa ukusetshenziswa kwepulasitiki okuyintombi nto.